Fujitsu FMV-E8110 Windows XP Drivers ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
smilecitys@gmail.com : ​ကို​ညီ​ရေ...​ကျွန်​တော်.. Fujitsu FMV-E8110 Windows XP Drivers ​လေး​လို​ချင်​လို့ ​ပါ​ဗျ..... ​ကျွန်​တော် ​ရှာ​ကြည့်​တာ​လဲ.. ​လုံး​ဝ​ရှာ​လို့​မ​ရ​လို့​ပါ... ​ကျေး​ဇူး ​တင်​ပါ​တယ်..​ဗျာ.......
​ကျွန်​တော် ​အောက်​မှာ Direct link ​က​နေ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်​ဗျာ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​အား​လုံး​ကို Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ​ပြီး​ရင် Run ​လိုက်​တာ​နဲ့ folder ​အ​သစ်​နာ​မည်​နဲ့ driver ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​ပေါ်​လာ​တဲ့ folder ​ထဲ​က setup ​ဖိုင်​ကို install ​လုပ်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ဒီ​လောက်​ဆို​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ်. ​လုပ်​ကြည့်​လိုက်​ပါ. Download ​လုပ်​ဖို့​က​တော့ ​အ​ခု​အောက်​က​လင့်​တွေ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ adf.ly ​ဆိုက်​ထဲ​ကို​ရောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​ဒီ့​အ​ခါ​ကျ​ရင် ​ငါး​မိ​နစ်​စောင့်​ပေး​ပြီး​တော့ ​ညာ​ဖက်​အ​ပေါ်​ဆုံး​က SKIP AD ​ဆို​တဲ့ ​စာ​သား​ကို​နှိပ်​ရ​မှာ​ပါ. ​အ​ဝါ​ရောင်​နောက်​ခံ​နဲ့​ပါ.
Atheros AR5001X+/AR5006X/AR5006EXS Wireless LAN Drive
Plugfree NETWORK Ver3.1
FM Advisor V3.50 L10A
min ma kha April 13, 2012 at 11:16 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ခင်​ဗျား....​အ​ကူ​ညီ​တစ်​ခု​တောင်း​ချင်​လို့​ပါ...​ကျ​နော့်​လက်​တော့​က fujitsu fmv
E8110 ​အ​မျိုး​အ​စား​ပါ​ပဲ..​အ​ကို​ပေး​ထား​တဲ့​ဒေါင်း​လုတ်​လင့်​က​နေ ​ဒေါင်း​လုတ်​ဆွဲ​ပြီး​ပါ​ပြီ ..​အဲ​ဒါ​ကို
​ဘယ်​လို​သုံး​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ​ကို ​အ​သေး​စိတ်​ရှင်း​ပြ​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျား...​ကျ​နော့်​လက်​တော့​က ​ဝယ်
​တုန်း​က ​ဝါ​ယာ​လက်​ပါ​တယ်..​ခု​တော့ ​ဝင်း​ဒိုး​အ​သစ်​တင်​လိုက်​တာ ​ဘယ်​ပျောက်​သွား​သ​လဲ​မ​သိ​တော့
​ဘူး...​ဘယ်​လို​ပြန်​လုပ်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ​ကို ​ပြော​ပြ​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျား...​ဖြစ်​နိုင်​ရင် ​ကျ​နော့်​အီး​မေး
​ထဲ​ကို (​ဝါ​ယာ​လက်​ပြန်​ဖေါ်​ပုံ​ဖေါ်​နည်း​လေး ​အ​သေး​စိတ်​ကို) ​မေး​ပို့​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ်..
​ကျ​နော့်​အီး​မေး​က minmakha.245@gmail.com ​ပါ​ခင်​ဗျား..
san aung April 10, 2014 at 5:07 PM
My note book is fujitsu FMV P8215T. I would like you to tell me where I can download its sound driver for free. Thank you very much.
Screen ​ကို password ​ဖြင့် lock ​ချ​ထား​လို့​ရ​တဲ...